Blog မှာ GIF file ထည့်ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
မူလ › Web Base › Blog
ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ယခု ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပါသလား? ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး မေးမြန်းလိုပါလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button များမှတဆင့် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်သကဲ့သို့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်အနေဖြင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
12.9K အမျိုးအစား အားလုံး
3.1K Daily Life
569 Antivirus & Virus
966 Internet & Email
129 Internet Security
20 IT Debates
818 Help Desk
775 About Forum
296 MZ News
14 MZ Blog
1.3K Member ဆိုင်ရာ
3 Members Showcase
10 MZ's Pick
6 Reader's Pick
75 Job Vacancy
192 My Article
20 Theory And Data Structure
608 Web Development
10 Ruby On Rail
74 ASP / ASP.NET
83 HTML / CSS
360 Mobile Devlopment
144 iOS Devlopment
81 Android Development
119 other mobile
23 Windows Mobile
30 Linux Server
12 3D Max
406 Tech News
67 Rapidshare Account
288 File Request
10 Computer Humor
36 Desktop PCs
17 Apple Sale
29 Laptops & Notebooks Sale
15 Book Sale
28 Network Accessories Sale
23 Drives & Storage
187 Web Base
154 Windows 7
62 Windows Vista
178 Windows XP
54 Windows Server
34 Open Source
33 Printers & Scanner
MYSTERY ZILLION တွင် English သို့မဟုတ် Unicode ဖြင့်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ဇော်ဂျီ ၊ ဧရာ စသည်တို့ကို အသုံးပြုခွင့် မရှိ။ Unicode fonts များမှာ Mon3,Yunghkio, Myanamr3 စသည်များ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Unicode Guide ကို ဒီမှာ Download ချပါ။ Zawgyi to Unicode Converter
Don't share ebook or software if nobody request. You can find free book websites on here. We are welcome for discussion or asking question instead.
Blog မှာ GIF file ထည့်ချင်လို့
September 2009 edited September 2009 in Blog
Blog မှာ GIF file ထည့်ချင်လို့ ဘယ်ဆိုက်မှာ သွားပြီး code ကို host ယူရမှာလဲ ကူညီပါအုံး
September 2009 edited September 2009 Registered Users
zaucentury ထည့်ချင်တဲ့ ပုံကို Upload ဆိုဒ်တစ်ခုခုမှာ တင်လိုက်...ပြီးရင် ရလာတဲ့ URL ယူပြီ Blog မှာ ထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ် ..Upload ဆိုဒ်တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ Tinypic သုံးတယ်။ စမ်းကြည့်ပါဦး ..။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို အဆင်ပြေပါတယ်........ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလောက်သိချင်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင်စာသားနဲ့ GIF file တစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ် ဘယ်ဆိုက်မှာ သွားလုပ်ရမှာလဲ
ကိုယ်ပိုင် စာသား ( အထူးသဖြင့် မြန်မာဖောင့် ) တွေနဲ့ GIF File လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Photoshop ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်တာ ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်တယ်..။ Photoshop နဲ့ GIF File လုပ်တဲ့ Tutorial တွေကို အောက်ကလင့်ခ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
ကျေးဇူးပဲ အကို မနောသားရေ